मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पवित्र महिना रमजान आजबाट शुरु -
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पवित्र महिना रमजान आजबाट शुरु
धार्मिक/समाज मुख्य खबर
बैशाख १, २०७८ बैशाख १, २०७८ हिमचुली खबरLeaveaComment on मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पवित्र महिना रमजान आजबाट शुरु
— रईस शाही
रमजान के हो ?
रमजान या रमदान (उर्दु –अरबी – फारसी) इस्लामी कैलेण्डर अनुसार रमजान नवौं महिनाको नाम हो । मुस्लिम समुदायले यो महिनालाई पवित्र महिनाको रुपमा मान्ने गर्दछन् । यो महिना भरी मुस्लिम समुदायले निराजल ब्रत (उपवास) बस्ने गर्दछन् । इस्लामिक मान्यता अनुसार यो महिना “अल्लाहसँग इबादत” को महिनाको रुपमा पनि मान्ने गरेका छन् । मान्यता छ कि यो महिनामा हृदय देखि अल्लाहको इबादत (पूजा) गर्नेहरुको जायज इच्छाहरु पुरा हुने गर्दछ । अल्लाहले भन्नु भएको छ रमजान मेरो महिना हो । यो महिनामा अल्लाहले एक पुण्य बराबर सत्तर गुणा पुण्य दिने वाचा गरेका हुन् तसर्थ यस महिनामा मुस्लिम समुदायले अरु महिना भन्दा रमजानको महिनामा बढी अल्लाहको इबादत गर्ने, कुरआन पाठ गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने गर्दछन् ।
रमजान कसरी मनाइन्छ ?
रमजान महिनाभर मुस्लिम समुदायद्वारा खाना पानी नखाएर निराजल ब्रत बस्ने गर्दछन् । रमजान महिनामा रोजा बस्ने श्रद्धालुहरुले सूर्य उदाउनु भन्दा पूर्व हल्का नास्ता खाने गर्दछन् जसलाई सुहूर (सेहरी) पनि भन्ने गर्दछन् । दिनभर निराजल ब्रत बसी कुरआन पाठ, नमाज पढी साँझ सूर्य अस्ताए पछि मात्र रोजा खोल्ने अर्थात केही खाने कुरा खाएर रोजा खोल्ने गर्दछन् रोल्ने अर्थात तोडनेलाई इप्mतार नाम दिएका छ । रमजानको महिनामा रोजा बसेकाहरुले प्रायः खजूर खाएर रोजा तोड्ने गर्दछन् । इस्लामिक मान्यता अनुसार अल्लाहका दूतले आफ्नो रोजामा सेहरी र इप्mतार प्रायः खजूर खाएर रोजा शुरु गर्ने र तोडने गर्नु हुन्थ्यो । उस्तै पनि विज्ञानका अनुसार खजूर शरीरको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ । खजूरले पेट सम्बन्धी समस्या, लीभर, तथा अन्यमा पनि लाभदायक साबित हुन्छ ।
रमजानको महत्व के हो ?
मुस्लिम समुदायका प्रत्येक ७ वर्ष भन्दा माथिकालागि रमजानको रोजा बस्न अनिवार्य छ । मुस्लिमहरुका लागि रमजान महिना सबै भन्दा पवित्र महिना हो । रमजानको यो पवित्र महिनामा मुस्लिमहरुले पूरा महिना रोजा बस्ने गर्दछन् । मान्यता छ कि रमजानको महिनामा रोजा बस्ने र अल्लाहको इबादत गर्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण गुनाह (पाप) लाई माफी मिल्ने गर्दछ । अर्थात प्रत्येक मुस्लिमका लागि रमजान महिना वर्षकै विशेष महिनाको रुपमा महत्व दिएका छन् । मान्यता छ कि, रमजानको महिनामा जन्नत (स्वर्ग) को ढोकाहरु खुल्ला रहन्छ ।
रमजान किन मनाईन्छ ?
इस्लाम धर्मको मान्यता अनुसार रमजानको महिना आफू माथि नियन्त्रण र संयम राख्ने महिना हो । रमजानको महिनामा मुस्लिम समुदायद्वारा रोजा राख्नुको मुख्य कारण गरीबहरुको दुःख र दर्दलाई सम्झनु हो । इस्लाम धर्मको मान्यता अनुसार रमजानको महिनामा रोजा राखेर विश्वका गरीबहरुको दुःख र दर्दलाई महशूस गर्नु हो ।
रोजाको समयमा संयमको अर्थ यो हो कि, आँखा, नाक, कान र जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो, किनकि रोजा बसेको बेला गलत नसुन्ने, गलत नहर्ने र झूठ नबोल्ने हुन्छ । रमजान महिनाले मुस्लिम समुदायलाई धर्मानुसार धार्मिक श्रद्धाका साथ साथै गलत अथवा नराम्रो बानीलाई छोडने र आपूm माथि संयम राख्न सिकाउँछ ।
रमजान महिनामा पवित्र ग्रन्थ कुरआनको नुजूल (अवतरण)
इस्लाम धर्मानुसार रमजान महिनाको २७औं रात शब–ए–कद्रको कुरआनको नुजूल (अवतरण) भयो । यसकारणले पनि यो महिनामा कुरआन पाठ गर्नु धेरै पुण्य मानिन्छ । तरावीह (रमजान महिनामा ईशा नमाज पछि पढ्ने विशेष नमाज) नमाजमा महिनाभरी कुरआनको पाठ गरिन्छ जसले कुरआन पाठ गर्ने र सुन्ने दुवैलाई पुण्य प्राप्त हुने गर्दछ ।
रमजान महिनामा सदका र जकातको महत्व
इस्लाम धर्मानुसार प्रत्येक मुस्लिमले आप्mनो ज्यानको सदका (दान) गर्ने पर्ने हुन्छ । जो घरको मुलीको उसले आफ्नो परिवारको सदका दिनु पर्ने हुन्छ । सदका रमजानमा नै दिनु पर्दैन् । सदका प्रत्येक महिना पनि बाड्न सकिन्छ । तर मुस्लिम समुदायमा प्रायः सदका रमजान महिनामा नै बाड्ने गरिन्छ ।
जकात अथार्त आफ्नो सम्पत्तीको १०० मा २.५ प्रतिशत दान गर्नु । जकात मुस्लिम समुदायलाई जो मालिके निसाब अर्थात इस्लामिक कानूनले जसको माथि जकात दान गर्न लागु हुन्छ उसले आप्mनो सम्पत्तीको १०० मा २.५ प्रतिशतका दरले दान गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
घरमै बसेर जग्गाको नक्शा प्रिन्ट, राजश्व भुक्तानीलगायतका व्यवस्थासहितको ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन सेवा शुरु
बाँके युनेस्को क्लबद्वारा प्रिपेड कार्ड मार्फत सहयोग प्रदान
फाल्गुन १८, २०७७ फाल्गुन १८, २०७७ हिमचुली खबर
फाल्गुन १५, २०७७ फाल्गुन १५, २०७७ हिमचुली खबर